Serbia: Belgrade ho an’ny Monopoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2019 12:46 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Ny 13 Febroary, niantso ireo namany bilaogera ao amin'ny B92 i Belius mba hanohana ny fanendrena an'i Belgrade:
Ry bilaogera malala,
Tsy ampy herinandro akory, niala tany amin'ny laharana faha-24 i Belgrade ary tafiakatra ho faha-10 tanatin'ny lisitry ny Monopoly ahitàna ireo tanàna mifaninana hiditra anatin'ny Fanontana Manerantany.
Isaorana ireo olona nikiry nifidy isan'andro tamin'iny herinandro lasa iny, lasa alohan'ireo tanàna toa an'i Amsterdam, Atena, Tokyo, Toronto, Barselona ary Kiev i Belgrade amin'izao.
Angamba tsara kokoa ny miteny fa i Montreal, Paris, Cape Town, Londona, Sydney, New York, Jerosalema, Riga ary Roma sisa no eo alohan'i Belgrade.
[Ny 14 Febroary, iray andro monja taorian'izay, nandroso ho laharana faha-5 i Belgrade.]
Haingana dia niparitaka ny vaovao momba ny mety hisafidianana an'i Belgrade ho isan'ireo tanàna 22 ao anatin'ny Fanontana Manerantany.
I Latvia/Riga irery no mpifaninana mitovy hafainganam-pamindra toa azy. Anatin'io firenena io, misy hetsipanentanana voarindra goavana miaraka amin'ny fananampian'ireo fitaovana fanapariaham-baovao maro.
Manantena aho fa hanohana an'i Belgrade ihany koa ny haino amanjerintsika. Ny 28 Febroary no fotoana farany ahafahana mifidy.
Lasa mpifaninana amintsika koa i Novi Sad, ao amin'ny lisitra fanampin'ny Monopoly. Koa satria 24 no isan'ireo toerana, hisy tanàna roa hafa hotsongaina avy amin'io lisitra io. Hanomboka ny 29 Febroary ny fifidianana ireo tanàna roa fanampiny ireo.
Tena zava-dehibe ny fisafidianana an'i Belgrade, koa mandefa ity fanasàna ity aminareo aho mba hanohy ny hetsipanentanana ho an'ireo andro vitsivitsy manaraka. […]
Maneho hevitra i Milos33:
[…] Manaja an'ity lahatsoratra ity aho… Nifidy isanandro aho tanatin'ireo andro vitsy lasa ary hifidy mandra-pahatapitry ny fifidianana… […]